Breaking: टोकियोमा शक्तिशाली भूकम्पको धक्का महसुश ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियBreaking: टोकियोमा शक्तिशाली भूकम्पको धक्का महसुश !
Breaking: टोकियोमा शक्तिशाली भूकम्पको धक्का महसुश !
टोकियो , भर्खरै जापानमा शक्तिशाली भूकम्पको महशुश भएको छ । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार मियागी प्रिफेक्चर नजिकै केन्द्रबिन्दु भएर ७ दशमलव २ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको बताईएको छ । यो भूकम्पपछि पराकम्पहरु जान सक्ने भएकाले सुरक्षित रहन अनुरोध गरिएको छ ।
मियागी केनको समुद्री तट नजिक रहनुभएका मानिसलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जान समेत अनुरोध गरिएको छ ।भूकम्प पछी सुनामीको सम्भावना रहेको बताइएको छ । जापानी संचारमाध्यमहरुले निरन्तर चेतावनी प्रसारण गरिरहेका छन् । भूकम्पबारे थप जानकारी केहि बेरमा ।
उता चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतमा शुक्रबार ६.१ म्याग्‍निच्युडको भूकम्प गएको चिनियाँ भूकम्प सूचना केन्द्रले जानकारी दिएको छ। केन्द्रका अनुसार उक्त भूकम्प शुक्रबार अपराह्न २.४१ बजे गएको थियो। भूकम्पको केन्द्र जमिनको सतहबाट करिब १० किलोमिटर गहिराईमा रहेको थियो।
उक्त भूकम्पबाट जनधनको कुनै क्षति भए/नभएको बारेमा विस्तृत विवरण प्राप्त भइनसकेको स्थानीय अधिकारीहरुले बताएका छन्। त्यस्तै पोर्चुगलको राजधानी लिस्वनमा भूकम्पको धक्का महशुस भएको छ । बिहान ९ बजेर ५१ मिनेट जाँदा भूकम्पको धक्का महशुस भएको हो ।
आइपिएमएका अनुसार भूकम्पको केन्द्रविन्दु लिस्वनदेखि ८ किलोमिटर पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने लोरेसमा रहेको छ ।उसका अनुसार ३ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको धक्का महशुस गरिएको छ । भूकम्पका महशुस त्यस क्षेत्रका हजारौं नागरिकहरुले गरेको आइपिएमले जनाएको छ ।१७५५ नोभेम्बर १ मा पोर्चुगलमा भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो ।